Athini amaxabiso akhethwe kwizikhundla ezimfutshane? | Ezezimali
Elinye lamaqhinga asetyenziswa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ukubonisa ukuba ngawaphi amaxabiso esitokhwe esitokhwe aphantsi kwawo intengiso enkulu ngemali kunye neearhente zezemali. Kuzo zonke iimeko kufuneka bazipapashe kwiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lweNtengiso (CNMV). Kuzo zonke iimeko baya kukunika umqondiso ongaqhelekanga apho imisebenzi iqhubeka ngezandla eziqinileyo zentengiso ye-equity kwaye ubenakho ukuzisebenzisela inzuzo yakho.
Kumaza amva nje kwezi datha ezichonga ukuba yeyiphi eyona ndlela inokuba yeyokuthatha ukhuseleko oluluhlu, kutyhilwa ezinye iinkcukacha ezifanelekileyo ezinokukunceda ukuhambisa imisebenzi yakho ukusukela ngoku. Enye yezona zinto zibalulekileyo, nokuba bezikwiklasta yemarike yemasheya, bonisa ukuba umhambisi wokutya Usuku ihlala yenye yeenkampani ezicinezelwa kakhulu yimali yebhere. Ngoxinzelelo kwintengiso edlulileyo kwiiveki ezidlulileyo ukusuka kwi-11,45% ukuya kwi-12,5%.
Ezi nkcukacha zichanekileyo zityhila isizathu senkampani edweliswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Yeyiphi eye yancipha kangangokuba ngezantsi kweyunithi yeyuro, kwaye ngakumbi ngokukodwa kumanqanaba asondele kakhulu kwi-0,70 euro ngesabelo ngasinye. Ngokwehla kweyona ndawo iphakamileyo kule minyaka idlulileyo ukusukela oko ukubuyisela umva inyuka ayizukukhetha ngaphandle kokuxabisa nge-150%. Into engenakwenzeka namhlanje kwaye siyoyika ukuba inokuba mandundu. Yinyani eboniswe leli xabiso ukuba kwiminyaka embalwa edlulileyo yayithengisa kumanqanaba ee-6 euros.
1 Ukhuseleko phantsi koxinzelelo lokuthengisa
2 Uxinzelelo kwizikhundla zikaBanka
3 Ukubeka izikhundla kwi-Acerinox
4 Ityala elingaqhelekanga: u-Endesa
5 Amanye amaxabiso ahlaselwe
6 Utolika njani ezi ntshukumo?
Ukhuseleko phantsi koxinzelelo lokuthengisa
Idatha ebonelelwe yiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoKhuseleko (CNMV) ibonisa olunye ulwazi olunokusetyenziswa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ukusukela ngoku. Umzekelo, ukuba olunye ukhuseleko olusemngciphekweni yinkampani yokwakha iVillar Mir, i-OHL, eba yinkampani yesibini ngobukho obukhulu beemali zebhere, akukho nto ingaphantsi nge-9,2% yezabelo. Emva kokuba umjelo wokugqibela obonelelwe yi-CNMV utyhile ukuba amabhere eza kulawula i-9,78% yezabelo zale nkampani kwi-Ibex 35.
Omnye umzekelo ocacileyo wento enokwenzeka kwizabelo zaseSpain okoko i-OHL ibe yenye yexabiso Ukuziphatha okubi babenako kukhetho lwesizwe. Ngelahleko ezinamanani aphindwe kabini phantse kwinyanga nganye kwaye oko kukhokelele kwinkuthazo eyomeleleyo kwiinyanga ezidlulileyo. Xa enyanisweni okwakusenzeka kwiimarike zezemali yayikukubaleka okukhulu kwizabelo zeli xabiso kwicandelo lokwakha. Akumangalisi ukuba iseyenye yezona zinto zibambekayo kwiimarike zezemali kwaye benze abatyali mali ababenezikhundla ezingakumbi kukhuseleko lwabo baphulukana nee-euro ezininzi.
Uxinzelelo kwizikhundla zikaBanka
Ibhanki evela kwibhanki yokonga endala lelinye lamaxhoba amakhulu kule ntsebenzo yeemali zebhere. Ayilolize, ukuba uye wahlupheka njengoko apha esiphelweni kuNovemba iibhere zonyuse uxinzelelo kwikomkhulu lazo, ukusuka kwi-4,01% ukuya kwi-4,21%. Ayisiyo ipesenti ebaluleke kakhulu, kodwa ubuncinci ichaza ukuvela kwezabelo zayo kwinxalenye yokugqibela yalo nyaka. Ikwayenye yamaxabiso asezantsi kwiimarike zemali ezilinganayo kwiinyanga ezidlulileyo.
Kwelinye icala, kuyamangalisa kakhulu ukuba eli qela lezemali lijoyina umkhwa ngokubanzi wecandelo lokugcina imali. Kungenxa yokuba, uninzi lweebhanki ezidweliswe kwii-equities zesizwe ziye zathwaxeka kweli xesha lokunyuka kwezikhundla ze-bearish ngezimali zotyalo-mali. Umzekelo, Bankinter eye yavela kwi-1,19% yaya kwi-0,73% nakwi-Sabadell, ukusuka kwi-1,77% ukuya kwi-1,76%. Amaqela ezemali aseleyo nawo aphantsi kwala manyathelo ukwenzela ukuba amaxabiso ezabelo zawo abuthathaka ngakumbi ekwehleni.
Ukubeka izikhundla kwi-Acerinox
Ezi zezinye iinkampani ezidwelisiweyo ezigcina iifayile ze- Umkhethe we-bearish Ngezandla ezomeleleyo zeemarike zezemali. Ngaphandle kokuqina ngakumbi kunale sele ikhankanyiwe emva kwedatha esandula ukugqithiselwa kwiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoKhuseleko (i-CNMV) nalapho kuboniswe ukuba babonisa ukuba izikhundla ezimfutshane ziyonyusile inkampani yentsimbi kwaye isuka kwi-2,72, Iipesenti ezingama-3,25 ukuya kwi-1,05%. Njengakwinkampani eyenziwe ngu-Amancio Ortega, ejongene nezikhundla zayo ze-bearish ukusuka kwi-1,24% ukuya kwi-XNUMX%. Kuzo zombini iimeko ezinokwehla okukhulu kwiinyanga ezidlulileyo kwaye oko kuchaza ubunyani bezi ntshukumo kwimarike yemasheya.
Kwelinye icala, kukho uthotho lweenkampani eziye zabuthathaka kwindlela yokuthengisa, nangona okwangoku zinamandla amancinci kakhulu kwaye kwezinye iimeko azifanelekanga kwaphela. Njengakwimeko ezithile zeenkampani ezikhokelayo kumacandelo emarike yazo ezinje I-Acciona, i-Amadeus, iTecnicas Reunidas, iCellnex ngakumbi i-Nokia Gamesa. Ukuya kwinqanaba lokuba inokunika olunye ulwazi malunga namaxabiso apho utyalo-mali lwethu lunokuchithwa khona ngoku.
Ityala elingaqhelekanga: u-Endesa
Imeko ehamba nenkampani yombane i-Endesa iyamangalisa kakhulu kwaye nangona iphuhlise inyanga engenakubekwa kwinyanga ka-Novemba ekuveleni kwexabiso layo, kunye ukunyuka kufutshane ne-3%, okufanayo akwenzeki ngezenzo zeemali ze-bearish. Apho kuye kwakho ukonyuka okubonakalayo kwizikhundla ezifutshane ezonyuke ngeli xesha ukusuka kwi-0,61% ukuya kwi-0,72%. Ngayiphi na imeko, ngokusebenzisa inani elingazange labonwa kwiminyaka edlulileyo yinkampani ye-Enel. Isenokuba sisilumkiso esicacileyo sokuhlengahlengisa izikhundla kwicandelo elixabise kakhulu kwiiseshoni zorhwebo zamva nje.
Akunakulityalwa ukuba umbane ukufutshane kakhulu nokumelana nawo kwii-maximum zayo zonyaka ezikulo amanqanaba angama-euro angama-21 ngesabelo ngasinye. Ngenkqubo enomdla kakhulu, apho lonke ixesha isondela kule ndawo yorhwebo ikhula ngokuwa okubukhali okubeka emngciphekweni izikhundla ezivulekileyo ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuya kwinqanaba lokuba ikwazi ukuhambisa ukuhamba kwayo ukuya kumazantsi ejelo, kumanqanaba aphakathi kwe-16 ukuya kwi-17 yeuros ngesabelo ngasinye. Njengoko yenzekile ngethuba lika-Agasti noSeptemba. Ukusuka kweli nqanaba lixabiso elinokuba yingozi kwimidla yakho.
Amanye amaxabiso ahlaselwe
Olu luhlu lubandakanya ixabiso lentengiso yeempawu zomenzi wecandelo lemoto CIE Izithuthi. Ewe, isukile kwi-1,94% yezabelo yaya kwi-2,16%. Apho izandla eziqinileyo zeemarike zezemali zikhetha ngokucacileyo kwintengiso kumonakalo wentengo. Ngaphandle kwento ebalaseleyo yohlalutyo lobuchwephesha kwaye iyenze ukuba ibe yenye yezokhuseleko kunye nokhetho olukhulu kwicala labatyali mali abancinci nabaphakathi. Into enzima, kwaye okuninzi ngokubonakala kwezi datha kwiingxowa-mali zokuhamba kwemali kwe-bearish.
Kuzo naziphi na iimeko, ziidatha ekufuneka uzivavanye ngononophelo kuba zinokukunika umqondiso ongaqhelekanga malunga nokuba kufuneka utyalile phi imali ukusuka ngoku. Ayisiyiyo kuphela malunga nokuthenga oya kuthi ukwenze ngokusemthethweni kwiimarike ze-equity, kodwa kunye nokukhetha amaxabiso ekufuneka enziwe Shiya ipotifoliyo yakho yotyalo mali. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Utolika njani ezi ntshukumo?
Elinye lamaqhinga ekufuneka ulisebenzisile ekufikeni kwale datha kusekwe ekuhlengahlengiseni ipotifoliyo yakho yotyalo-mali ngokusekwe kwizikhundla ezifika kancinci. Ngale ndlela, eyona nto isengqiqweni yokwenza kukuhlaziya amaxabiso okusebenza kwezi zinto zixabisekileyo. Lo msebenzi uza kunceda ukwandisa utyalo-mali kwaye ngale ndlela inzuzo oyifumanayo inkulu kunangaphambili. Ingakumbi inikwe unyaka ontsonkothileyo kwizabelo ngokubanzi njengolo lwenzeka ngoJanuwari.
Apho ukungazinzi kuya kuba yinto eqhelekileyo kwinxalenye enkulu yezokhuseleko ezenza isalathiso esikhethiweyo kwimarike yaseSpain, i-Ibex 35. Kuyakufuneka ukuba ukhuthale ngakumbi kunangaphambili ukufezekisa ukhetho lwezokhuseleko ilungelelene kwaye ngaphezulu kwayo yonke into enokubakho kuhlaziyo oluphezulu kunolunye. Njengoko yenzekile ngethuba lika-Agasti noSeptemba. Ukusuka kweli nqanaba lixabiso elinokuba yingozi kwimidla yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Athini amaxabiso akhethwe kwizikhundla ezimfutshane?